जीवन किन यति कठिन छ ? | Nepali Christians
जीवन किन यति कठिन छ ?
January 6, 2016 8:58 am by: Admin Category: Articles A+ / A-
हामी आफ्नो जीवन जिउनमा यति खटिएका हुन्छौं कि कुनै समय आफैलाई रोकेर जीवन किन यति कठिन छ ? भनेर प्रश्न गरिरहेका हुन्छौं । आफू र आफ्नो परिवारको हेरचाहको निम्ति किन यति गाह्रो संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ? भनेर आफैभित्र बहस गर्छौं । यो जीवनको कठिनाईहरूसँग हामी अनेकौं रूपहरू लिएर लडिरहेका हुन्छौं । यसैमा हामी निदाएका हुन्छौं ।
जीवनमा यस्तो पनि हुन आउँछ कि जसको कारण हामी बिउँझन्छौ । एकदिन हाम्रो आमाबुवाको मृत्यू हुनेछ । छिमेकीलाई कसैले अपहरण गरेर लानेछ । कतिवटा सम्बन्धहरू टुटेर जानेछन् । यो सबै कुराहरूले हामीलाई केहि छिनको निम्ति बिउँझाई राख्नेछ, तर फेरि अर्को डर अथवा कठिनाईको सामना गर्नु नपरेसम्म हामी निदाउँनेछौं । फेरि हामी भन्न थाल्नेछौं यहाँ केहि पनि सही छैन । जे कुराहरू छन्, हुन आउँछन् सबै गलत छन् । जीवन त यस्तो नहुनुपर्ने थियो ।
खराब कुराहरू किन आउँछन् ? के यहाँ एउटा पनि असल ठाउँ छैन ?
किन ? बाइबलमा यो प्रश्नको उत्तर छ । तर धेरै मानिसहरूले सुन्न चाहे अनुसारको उत्तर छैन । संसार यस्तो छ, जस्तो उसलाई हुनुपर्ने थियो, किनकि यहाँ यस्तै संसार छ, जस्तो हामीले मागेका छौं ।
सुन्दा अचम्म लाग्छ ।
के यहाँ कसैले यो संसारलाई आफूले चाहेअनुसार बनाउन सक्छ ? यहाँ कोही छ जसले जीवनलाई दुःखबाट मूक्ति दिनसक्छ ? तर परमेश्वरले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ । यही उत्तर मैले बाइबलमा पाएँ । यो धेरै मानिसहरूको निम्ति स्वीकार्य उत्तर नहुन सक्छ, तर यो भन्दा अरू विकल्प संसारले कहिल्यै पाउने छैन । कसैले नसकेको कुरा परमेश्वरले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ । तापनि धेरैपटक परमेश्वरले त्यो कुराहरू पुरा गर्नुहुन्न । यसकारण हामी परमेश्वरप्रति दुःखित हुन्छौं । अनि हामी भन्छौं परमेश्वर यति शक्तिशाली र सबैलाई प्रेम गर्ने हुनुहुन्न होला, यदि उहाँ त्यस्तो भएको भए संसार यस्तो हुने थिएन । जस्तो अहिले छ । यही कुरा मेरा धेरै मित्रहरूले मलाई सुनाएका छन् ।
हामी यस्तो कुरा यसकारण गर्छौं कि सायद यो तथ्यमा परमेश्वरले आफ्नो इच्छा बदल्नुभएको होस् । हामी यस्तो सोच्छौं कि कतै हामीले अपराधबोधको अनुभव गर्यौं र यो कुराप्रति परमेश्वरलाई दोष लगायौं भने हाम्रो जीवनमा जे भएको छ त्यो कुरामा बदलाव आउनेछ । वास्तवमा यसले जीवनमा झन् कठिनाई थप्नेछ ।
यस्तो लाग्छ कि उहाँ आफ्नो ठाउँबाट हल्लिन नै चाहनुहुन्न । किन उहाँले यस्तो गर्नुहुन्छ ?
परमेश्वर आफ्नो ठाउँबाट हल्लिनुहुन्न, किनकि मानिसले भन्ने वित्तिकै उहाँले कुनै पनि चिजलाई परिवर्तन गर्नुहुन्न । जे हामीले उहाँसँग मागेका छौं, त्यो उहाँले दिइरहनुभएको छ, यस्तो संसार जहाँ हामी परमेश्वरलाई यस्तो व्यवहार गर्छौं कि उहाँको अनुपस्थितिमा पनि उहाँको आदर हाम्रो जीवनबाट होस् ।
के तपाईंलाई आदम र हब्बाको बारेमा थाहा छ ? उनीहरूले, “निषेध गरिएको फल” खाएका थिए । परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाप्रति आज्ञाकारी “अनुशासित” हुनको निम्ति देखाईएको रूखको फल एउटा विचार थियो । आदम र हब्बाले एक प्रकारले ईश्वर जस्तै बन्ने आशा गरेका थिए । परमेश्वरबाहेक अरू कुरा पनि छन् जुनचाहिँ परमेश्वरभन्दा मुल्यवान छ भन्ने आफ्नो विचारलाई आदम र हब्बाले महत्व दिए । उनीहरूको गल्तीद्वारा उनीहरूले जुन कुरा अपनाए, त्यसैको फलस्वरूप यो संसार आयो । आदम र हब्बाको कहानी नै हामी सबैको कहानी हो ।
कतिपटक हामी धेरैजनाले यही भन्छौं कि प्रभु योजना बनाईदिनुभएको लागि धन्यवाद ! तर तपाईंविना नै म यो काम गर्नसक्छु । हामी सबैले परमेश्वरविनाको जीवन सुचारू गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं । हामी किन यस्तो गर्दैछौं ? सायद हाम्रो भित्र पनि आदम र हब्बाको जस्तो भावना आएको हुनुपर्छ । यसकारण हामी परमेश्वरभन्दा मूल्यवान अरू नै कुरालाई खोज्न लागिपरेका छौं । फरक–फरक मानिसहरूको निम्ति भिन्नाभिन्नै चिजहरू छन् । सबैको मानसिकता एकै जस्तो हुन्छ, धेरैले भनेको सुनेंः “जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा परमेश्वर होइनन् । म उहाँ विना नै छिट्टो छिट्टो काम गर्नेछु ।”
यसमा परमेश्वरको प्रतिक्रिया के छ ?
सबै मानिसहरूसँग दुःखको अनुभव हुन्छ । यहाँ उसलाई उसको इच्छाअनुसार जिउन दिइएको छ । मानिसहरू आफ्नै इच्छाले परमेश्वरको तरिका विपरित चलिरहेका छन् । हत्या, यौनशोषण, लालच, झूठ, धोखा, बदनामी, व्यभिचार, अपहरण आदि, यी सबै मानिसको आफ्नै छनौटको हतियारहरू हुन् ।
सोच्नुहोस् जब जीवन अनुचित बन्दै जान्छ, तब के गर्ने ? त्यो भयंकर परिस्थितिमा के गर्ने ? जुन कुराको दुःखाई हामी सहन्छौँ र त्यो हाम्रो कारण हुँदैन तर अरू कसैको कारण हुन्छ । याद गर्नुहोस् येशू ख्रीष्टले ठिक यहि कुरालाई सहनुभयो, जसको कारण हामी थियौं ।
जब हामी सताइन्छौँ र कठिनाईहरूमा अल्झिन्छौँ, तब याद गर्नुहोस्, येशू आफैले दोस्रो मानिसहरूको खराब व्यवहार सहनुभयो । तपार्इं के सोच्दै हुनुहुन्छ ? कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ ? के येशू ख्रीष्ट आफै पनि तपाईंभन्दा बढी कठिनाईमा पर्नुभएन र ? के येशू ख्रीष्टले हाम्रो भन्दा सुबिधाको जीवन जिउनुभयो र ?
हाम्रो लागि येशूले जति सहनुभयो त्यो भन्दा बढी दर्दनाक जीवन केहि पनि होइन । उहाँको मित्रले उहाँलाई त्यागे, जसले उहाँमाथि विश्वास गरेनन् तिनीहरूले उहाँको उपहास गरे । क्रुसमा चढाउनु अघि उहाँलाई कुटियो, सताइयो र क्रुसमा किला ठोकेर झुण्डाईयो । सबैको अघि लज्जास्पद रुपमा सार्वजानिक बेइज्जत गरियो ।
उहाँले फेरी हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो । आफूमाथि अत्याचार गर्न मानिसहरूलाई छुट दिनुभयो ताकि उहाँ आउनुको उद्देश्य पुरा हुन सकोस् र हामीलाई आफ्नो पापबाट छुटकारा मिलोस् । येशूको लागि यहाँ कुनै नयाँ कुरा थिएन । जे हुनेवाला थियो त्यो सबै कुरा उहाँलाई थाहा थियो । सबै कुरा, सबै पिडा, सबै दुःखाई, र सबै कठिनाईप्रति पुर्वज्ञान थियो ।
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंलाई तपाईंको जीवनमा केहि भयानक हुनेवाला छ भनेर थाहा भयो भने त्यो समय कस्तो हुनेथियो ? त्यो रात येशूलाई थाहा थियो कि उहाँलाई कैद गरेर लानेछन् ।
संसारमा दुःख र तीव्र पिडा छ । प्रभू आफैले पनि दुःख सहनुभयो, उहाँले हाम्रो दुःख र कष्टलाई महसुस गर्नुभएको छ । येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “शान्ति म तिमीहरूसँग छोडिराख्छु । म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु । संसारले दिएजस्तो त म तिमीहरूलाई दिन्नँ । तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् र भयभीत नहोस् ।” हामी भयभीत हुनुमा, निराश हुनुमा अनेकौं कारणहरू छन् । तर परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो शान्ति दिनुहुन्छ । उहाँ नै सिर्जनाहार परमेश्वर हुनुहुन्छ । हाम्रो सृष्टिकर्ता । उहाँले नै यस संसारलाई बसाल्नुभयो ।”
उहाँले हामीलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ । उहाँले हामीसँग घनिष्टताको सम्बन्ध राख्नुभएको छ । हाम्रो सानो भन्दा सानो खाँचोहरू उहाँलाई थाहा छ ।
यदि हामी आफ्नो जीवन येशूमा सुम्पन्छौँ भने, उहाँमा निर्भर रहन्छौं भने, हामीले पार गर्नुपर्ने सबै कठिनाईहरूमा उहाँले हामीलाई समात्नुहुनेछ । मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु, कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस् । संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु ।” येशू हाम्रो लागि खतराको चरम सिमासम्म जानुभयो । मृत्यूमाथि विजयी हुनुभयो । यदि उहाँमा हामी साँचो विश्वास गर्छौं भने उहाँले हामीलाई जीवनको कठिन परिस्थितिहरूमा लानुहुनेछ र त्यसको सट्टामा अनन्त जीवन दिनुहुनेछ ।
हामी कि त परमेश्वरसँग भएर जान सक्छौं, कि त उहाँविना भएर जान सक्छौं । येशूले प्रार्थना गर्नुभयो, “धार्मिक पिता, संसारले तपाईंलाई चिन्दैन, तर म तपाईंलाई चिन्दछु, अनि तपाईंले मलाई पठाउनुभएको हो भनेर यिनीहरूले जान्दछन् । मैले तपाईंको नाउँ यिनीहरूमा प्रकट गरें, अनि तपाईंको नाउँ यिनीहरूमा प्रकट गराइरहनेछु, ताकि जुन प्रेमले मलाई तपाईंले प्रेम गर्नुभयो, त्यो तिनीहरूमा रहोस्, र म तिनीहरूमा रहुँ ।”
( इसाई पुस्तिका सादृश्यमा प्रकाशित)
जीवन किन यति कठिन छ ? Reviewed by Admin on Jan 06 . हामी आफ्नो जीवन जिउनमा यति खटिएका हुन्छौं कि कुनै समय आफैलाई रोकेर जीवन किन यति कठिन छ ? भनेर प्रश्न गरिरहेका हुन्छौं । आफू र आफ्नो परिवारको हेरचाहको निम्ति किन हामी आफ्नो जीवन जिउनमा यति खटिएका हुन्छौं कि कुनै समय आफैलाई रोकेर जीवन किन यति कठिन छ ? भनेर प्रश्न गरिरहेका हुन्छौं । आफू र आफ्नो परिवारको हेरचाहको निम्ति किन Rating: 0
सर्भ नाउ नेपालद्वारा विविध सामाजिक...मदर टेरेसाका १० मननयोग्य भनाइहरू...